जाडो याममा विशेषगरी बालबालिकामा रुघाखोकी बढी र वयस्कमा घाँटीको समस्या « Nepal Page
माघ २३, २०७८ आईतबार
जाडो याममा विशेषगरी बालबालिकामा रुघाखोकी बढी र वयस्कमा घाँटीको समस्या
मानिसको संवेदनशील अंगमध्ये नाक, कान, घाँटी पनि हो । विगत तीन बर्षदेखि विश्वव्यापी महामारी बनेकोे काभिड–१९ संक्रमण सर्ने माध्यम नै नाक र मुख देखिएको छ । यद्यपि झण्डै एक शताब्दीपछि आएको कोभिड महामारी मात्र होइन, हरेक वर्ष विशेषगरी जाडोयाममा सिजनल फ्लुको रुपमा नाक,कान, घाँटीको समस्या देखापर्छ । जाडोयाममा नाक, कान, घाँटीमा आउने समस्या र यसबाट बच्नका लागि अपनाइने उपायहरुका विषयमा वीर अस्पतालका वरिष्ठ नाक, कान, घा“टी रोग विशेषज्ञ डा. अरुण केसीसंग नेपालपेजका लागि सन्जिना श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
विशेषगरी जाडो याममा नाक, कान, घाँटीका कस्ता समस्याहरु देखिन्छन् ?
जाडो याममा रुघाखोकी, एलर्जी, घाँटी दुख्ने समस्या बढी देखिन्छ । विशेषगरी बालबालिकामा रुघाखोकी बढी र वयस्कमा घाँटीको समस्या देखापर्छ ।
नाक, कान, घाँटीका सामान्य समस्या भन्नाले के बुझ्ने ?
विशेषगरी रुघाखोकीको समस्या बढी हुन्छ । रुघाखोकी भनेको भाइरल इन्फेक्सन हो । जाडो याममा घरका ढोकाहरु बन्द हुने, भेन्टिलेसनहरु कम खोल्ने हुँदा यस्तो संक्रमण एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसपछि भनेको चिसोको, धुवाधुँलोको एलर्जी हो ।
अनि जटिल समस्याचाहिं के हो त ?
विशेषगरी यो जाडो मौसममा नाकबाट रगत बग्ने समस्याहरु लिएर बिरामीहरु अस्पताल आउने गर्दछन् । गर्मी महिनामा नाकबाट रगत आउँछ भन्ने धारणा छ । त्यो सही हुँदाहुँदै पनि जाडोमा चाहिँ किन नाकबाट रगत आउँछ भने बन्द कोठामा हिटर, आगो ताप्दा सुख्खा हुन्छ । नाकमा धेरै सुख्खापन भयो भने रक्त संचालन भएन भने नाकबाट रगत आउँछ ।
यस्ता समस्याको उपचार विधि के हो ?
भाइरल इन्फेक्सन भएको हुनाले साधारण रुघाखोकी आफैं ठिक हुन्छ । हामीले सिम्टमम्याटिक अर्थात जे समस्या छ, त्यही अनुसार उपचार गर्छौ । नाकबाट रगत बग्यो भने इमर्जेन्सीमा उपचार गर्छौ । झन् अहिले त कोभिड–१९ को महामारी छ । सरकारले मापदण्ड तोकेअनुसार सकेसम्म भिडभाडमा नजाने, सामाजिक दुरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने गरियो भने रुघाखोकीबाट बच्न सक्छौं । यसैले होला तुलनात्मक रुपमा पछिल्लो दुइ वर्षमा कम बिरामीहरु रुघाखोकीको समस्या लिएर अस्पताल आउनुभएको छ ।
सामान्यतया धेरैले सोझैै मेडिकलबाट औषधि किनेर खाने गरेको पाइन्छ, यो कतिको सही हो ?
रुघाखोकी जुन आफैं ठिक हुने हो, औषधि खाए पनि नखाए पनि फरक पर्दैन । भाइरल इन्फेक्सन ३ देखि ७ दिनमा आफैं ठीक हुन्छ । सबैभन्दा नराम्रो चलन, हामी सानातिना समस्यामा एन्टीबायोटिकको प्रयोग गर्छौं । बिनाकारण एन्टीबायोटिकको प्रयोग गर्दा त्यसका दिर्घकालीन समस्याहरु धेरै हुन्छन् । त्योमध्ये एक हो एन्टीबायोटिक रेजिस्टेन्स ।
नाक, कान, घाँटीको कस्तो अवस्थामा अस्पताल जानुपर्छ ?
सामान्यतया भाइरल इन्फेक्सन ३ देखि ७ दिनमै निको हुन्छ । ७ दिनबाट पनि रुघा ठीक भएन टाउको दुख्ने, बाक्लो सिंगान आउने, खोकी लाग्ने, जीउ कटकट खाने, जीउ भारी हुने अर्थात् साइनोसाइटिक्स सिम्टम भयो भने अस्पताल जानुपर्छ । यो बेलाचाहिँ बिरामीले एन्टिबायोटिकको प्रयोग पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
कानसम्बन्धी कस्ता समस्या देखिन्छ ?
कानको समस्याको खासै सम्बन्ध जाडोसँग हुँदैन । जाडो यामकै कारण कानको समस्या हुँदैन । तर नेपालमा कानको समस्या धेरै मानिसमा छ । विशेषगरी कान पाक्ने समस्या, समयमा उपचार नपाएर भन्दा पनि सचेत नभएर जटिल समस्याहरु आउने गर्छ । कानको जालीमा प्वाल पर्ने, हड्डी खाने रोग, कान पाक्ने समस्या बढी हुन्छ । साधारणतया हाम्रो जनमानसमा कान पाक्ने समस्यालाई ठूलो समस्याको रुपमा लिइँदैन । जब यसले विकराल रुप लिन्छ, तब मात्रै अस्पताल जाने चलन छ । समयमै ध्यान दियौं भने खासै समस्या आउँदैन ।
कानको हेरचाह कसरी गर्ने ?
पटकपटक कान पाक्छ भने चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ । त्यसको निदान गर्न जरुरी छ । सकेसम्म कानमा पानी नपार्ने, तेलहरु नहाल्ने । तेल हाल्दा झन् इन्फेक्सन हुन्छ । हामी चिकित्सकहरु कानमा तेल हाल्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्छौ । विशेषगरी साना बालबालिकालाई सुताएर दूध खुवाउनु हुँदैन । रुघा लाग्दा कान, नाकलाई असर गर्ने गरी बेस्सरी सिं..सिं.. गर्नुहुँदैन । यो नराम्रो बानी हो । यसले विशेषगरी कानका बिरामीहरुलाई यसले असर गर्छ,।
घाँटीसम्बन्धी कस्ता कस्ता समस्या देखिन्छन् ?
घाँटी दुख्ने पहिलो इन्फेक्सन हो । घाँटी दुख्ने, ज्वरो आउने, निल्न समस्या हुने । कहिलेकाही भाइरल इन्फेक्सनसँग ब्याक्टेरिया इन्फेक्सन पनि हुन सक्छ । ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भयो भने एन्टीबायोटीक सेवन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यो बाहेक घाँटीमा एलर्जी हुने जसले गर्दा घाँटी खसखसाउने, खोकी लाग्ने हुन्छ, एलर्जी भए एलर्जीको औषधी सेवन गर्नुपर्छ ।
घाँटीमा हुने जटिल समस्यामा के हुन्छ ?
घाँटी खसखसाउने, स्वरमा परिवर्तन आउने, आज धेरै कराएँ घाँटी खसखसायो भन्दै चिकित्सककोमा नगई हेलचेक्र्याई गर्ने धेरैको बानी हुन्छ । एक, दुई महिनासम्म पनि कुर्छन् चिकित्सकको जानुभन्दा पनि यत्तिकै घरेलु उपाय अपनाउने धेरै समय खेर फाल्छ । जब डाक्टरको आउँनुहुन्छ, तब समस्या एकदमै जटिल भएर घाँटीमा क्यान्सर समेत भइसकेको हुन्छ । घाँटीको इन्फेक्सन एक अंगबाट अर्को ठाउँमा फैलिन सक्छ । त्यस्तो हुँदा समस्या आउन सक्छ, ज्वरो आउने ,पानी पनि निल्न नसक्ने, गाह्रो हुने हुँदा अस्पतालमा भर्ना लिएर अवस्थामा हामीले इन्जेक्सन लगाएर पनि उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । हेर्दा सामान्य तर पछि जटिल रोग बन्ने पनि हुन्छ ।
यसको उपचारचाहिं के हो नि ?
हेर्दाखेरी आवाज मात्र परिवर्तन भएको केही पनि नभएको जस्तो लाग्छ तर क्यान्सर भइसकेको हुन्छ । विशेषगरी सुर्तिजन्य पदार्थ, मादकपदार्थ खानेले आवाजमा परिवर्तन आयो भने चिकित्सकको परामर्श लिन आवश्यक छ । हामी घाँटीको विभिन्न अपरेसन गरिरहेकै हुन्छौ । विभिन्न चरणका घाँटीको क्यान्सरका विरामीहरु आइरहेका हुन्छन् । चाँडै आउनु भयो भने हामीले लेजरले कहीँ पनि नचिरी सानो प्वाल मात्र बनाएर उपचार गर्छौ । धेरैजसो बिरामीहरु एडभान्स केस फैलिएर आउनुहुन्छ । कति त सास फेर्न गाह्रो भयो भनेर आउनुहुन्छ । घाँटीमा प्वाल पारेर स्वास फेराउनुपर्ने पनि अवस्था हुनसक्छ । त्यस्तो विरामीहरुको ठ्याक्कै तथ्यांक नभए पनि धेरै आइराख्नुहुन्छ, अस्पतालमा ।
सावधानीका उपाय के छन् ?
सर्वप्रथम समस्या लिएर बसिराख्ने, दबाउने, जथाभावी उपाय अपनाउने गर्नुहुँदैन, जसले धेरै विकराल रुप लिन सक्छ । समयमै चिकित्सकसँग परामर्श लिएर रोगको पहिचान गर्न सक्यो भने ठूलो समस्याबाट बच्न सकिन्छ । क्यान्सर पनि सुरुमा आउँदा धेरै चिरफार नगरी उपचार गर्न सकिन्छ भने एकदमै फैलिएको केसमा धेरै चिरफारहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नेपालमै हामीसँग सबै साधनहरु छन् । रोग पत्ता लगाउनको लागि, आजभन्दा केही वर्षअगाडि पनि त्यस्ता साधनहरु उपलब्ध पनि थिएनन् । हामीसँग साधनहरु छ, इन्डोस्कोपी गरेर हेर्नसक्छौ । अहिले त रोगको निदान हुनसक्छ, तर चिकित्सककोमा पुग्नुपर्छ । जटिल अवस्थामा पुग्नु भन्दा अगाडि नै चिकित्सककहाँ पुग्नुपर्छ ।
समस्या नहुने व्यक्ति र समस्या हुने व्यक्तिले ध्यान दिने कुरामा के फरक छ ?
नाक, कान, घाँटीको कुनै पनि समस्या, चाहे नाक एक साइडको बन्द भइरहेको छ, निल्न गाह्रो भइरहेको छ, आवाजमा परिवर्तन भइरहेको छ भने एक, दुई हप्तामा ठीक भएन भने एकचोटी चिकित्सकको पनि परामर्शको लागि जानुपर्छ ।
घाँटी तथा मुखको क्यान्सर हुने सम्भावना कसरी हुन्छ ?
धेरैजसो चुरोट सेवन, पानपराग, गुट्खा, सुपारीहरु धेरै खानेलाई मुखको क्यान्सर हुने बढी सम्भावना हुन्छ । मादक पदार्थ, रक्सीको सेवनले घाँटीको क्यान्सर हुने सम्भावना धेरै हुनसक्छ ।
बालबालिका, बृद्धबृद्धामा चाहिं कस्ता जटिल समस्या देखापर्छन् ?
बालबालिकामा रुघाखोकी नै हो, तर कहिलेकाहीं अवस्था गम्भीर हुनसक्छ । बृद्धवृद्धामा भने दम, छातीको समस्या, निमोनियाजस्ता समस्याहरु देखापर्छन् ।
निमोनियाविरुद्धका भ्याक्सिनहरु पाइन्छ । चिकित्सकको सल्लाहमा भ्याक्सिनहरु लिँदा राम्रो । बच्चाहरुलाई पनि इन्फ्लुएन्जादेखि लिएर अन्य भ्याक्सिनहरु उपलब्ध छन् । जटिल समस्या नआओस् भन्नको लागि भ्याक्सिन लगाउनु राम्रो उपाय हो । विभिन्न उमेर समूहको लागि भ्याक्सिन पाइन्छ ।
नाक र घाँटीको एलर्जी कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ ?
वयस्क उमेर समुहमा विशेषगरी घाँटी, नाकको एलर्जी बढी हुने देखिन्छ । आफूलाई केको एलर्जी छ, त्यो पत्ता लगाउन जरुरी छ, सबैको एलर्जी फरक हुन्छ । अहिले त एलर्जी पत्ता लगाउने विधिहरु पनि आएका छन् । छालाको टेस्टीङबाट एलर्जी पत्ता लगाउन सकिन्छ । एलर्जी पत्ता लगाएर त्यसको उपचार गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा नाक, कान, घाँटीको उपचार कस्तो छ ?
पहिला पहिला नेपालमा नाक, कान, घाँटीको सबै खालको उपचार सम्भव थिएन । पछिल्ला वर्षहरु विभिन्न उपकरणहरु भित्रिएका छन् । नाक, कान, घाँटीको धेरैभन्दा धेरै उपचार सम्भव छ । चाहे क्यान्सर होस्, नाक, कान, घाँटीको अपरेसन होस्, धेरै उपचार नेपालमै सम्भव छ । हामीकहाँ उपचार गर्ने जनशक्ति अब्बल नै छन् । नाक, कान, घाँटीको कुनै समस्या लिएर विदेश जानुपर्दैन आजको दिनमा ।
मानिसहरुमा सचेतना पनि बढेको हो ?
मानिसहरु पहिलाको भन्दा अहिले धेरै सचेत भएको पाइन्छ । पहिला एकदमै एडभान्स हुँदा आउनुहुन्थ्यो, तर अहिले सुरुमै आउने बिरामीको संख्या बढेको छ । तर जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । गाउँघरमा अझै समस्या छ । कानको समस्या विशेषगरी बालबालिकामा, कान पाक्छ । पौडी खेल्दा कानको जाली प्वाल पर्छ भन्ने जनचेतना छैन । यो पनि ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा नाक, कान, घाँटी कसरी स्वस्थ राख्ने सल्लाह दिनुहुन्छ ?
मुख्य कुरा खानपीन पनि हो । प्रोटिन, कार्बोहाइट्रेड खानुपर्छ । शरीर स्वस्थ राख्न शारीरिक व्यायाम, मेडिटेसन गर्न सकिन्छ । कुनै समस्या आउँदा दबाएर नराख्ने, सकेसम्म चिकित्सकको परामर्श बेगर औषधीको सेवन नगर्ने कुरालाइृ ध्यान दिनुपर्छ ।
उसिनेको अण्डा खाएपछि भुलेर पनि खान नहुने यी ४ चिज
काठमान्डौ जेठ १ अण्डामा पाइने प्रोटिनहरूले तपाईंको शरीरलाई उर्जा दिन्छ, हड्डीहरूलाई सुदृढ पार्छ र आँखाको
गठबन्धनले सूर्यविनायकमा कुनै असर गर्दैन : वासुदेव थापा
वासुदेव थापा नेकपा (एमाले)बाट सूर्यविनायकमा नगरपालिकाको मेयरका लागि उम्मेदवार भएर घरदैलो अभियानमा छन् । यसअघि
बिरामीले मुगु अस्पताल भरिभराउ
खड्क सुनार मुगु । जिल्ला अस्पताल मुगुमा पछिल्लो समय बिरामीको चाप बढ्दै गएपछि अस्पतालका बेड
पाँच वर्षसम्म इमान्दार भएर गरेको विकासका काम नै मेरो जितको आधार हो : मदनसुन्दर श्रेष्ठ
मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको मेयरमा एमालेका तर्फबाट मदनसुन्दर श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका छन् । उनी मध्यपुर थिमिको
आगामी जेठदेखि स्वास्थ्य संस्थामा पनि दुई दिन सार्वजनिक विदा
काठमाडौं, २३ वैशाख । सरकारले आगामी जेठदेखि साताको दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने
माडीवासीको शिर निहुरिने काम गर्दिनँ, भ्रष्टाचारीका लागि गेट बन्द गर्छु : ताराकुमारी महतो
३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ताराकुमारी काजी महतोले नेकपा (एमाले)को तर्फबाट माडी नगरपालिकाको मेयरमा
खोप छुटेका सबैलाई अनिवार्य रुपमा लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे अनुरोध
काठमाडौं, २१ बैशाख । सरकारले आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा खोप लगाउन छुटेका
नयाँ मतदाता ५० देखि ६० प्रतिशत एमालेमा देखिएकाले निर्वाचन जित्छौँः ज्ञवाली
देश संघीय प्रणालीमा गएपछिको दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचन ३० वैशाखमा हुँदै छ । निर्वाचनमा अघिल्लो